'Nnukwu Lgha' Oge 2, Ihe Omume nke 3 Recap - Ozi
Enyi Na Ezi Na Ụlọ
Madeline Na-wedara Onwe Ya n’Oha n’ihu Oha ohuru na ‘New Little Little Lies’
Madeline Publicly Humiliates Herself New Big Little Lies Episode
* Ningdọ aka na ntị: Ndị na-apụnara mmadụ ihe n'ihu *
Ikpeazụ izu na Nnukwu Littlegha , Mary Louise (Meryl Streep) gara n'ihu pịa Celeste (Nicole Kidman) maka azịza banyere ọnwụ dị omimi nke Perry (Alexander Skarsgård), ebe Madeline (Reese Witherspoon) gbalịrị imezi mmekọrịta ya na Ed (Adam Scott).
Ugbu a, ndị Monterey Five tinyere obi ike dịka obodo na-aga n'ihu na-enyocha akụkọ ha. Nke a bụ ihe gbadara n'oge nke abụọ, nke atọ nke BLL , akpọrọ The End of the World.
Jennifer Clasen / HBO
Ihe Si na Ya Pụta
Ihe omume ahụ meghere na Bonnie (Zoë Kravitz) na-eche echiche na Trivia Night, mgbe ọ kpaliri Perry ka ọ nwụọ site na steepụ. A na - egbochi ụda ya site na ụda nne ya, Elizabeth (Crystal Fox), na nwa ya nwanyị, Skye (Chloe Coleman), na-abụ abụ n'ime ime ụlọ. N’agbanyeghi na ọ chọghị ịba na mbụ, Bonnie sonyere ha.
Gaa na Madeline na-ekwu, M ga-agbago. Enweghị ụzọ ọzọ ị ga-esi kwuo ya. Ọ na-anọdụ ala n’ihe ndina dị n'akụkụ di ya, Ed, ebe onye na-agwọ ọrịa Celeste, Dr. Amanda Reisman (Robin Weigert), ji nwayọ na-ege ntị n’olu dara ụda ya.
Onye na-agwọ ọrịa ahụ gbanwere mkparịta ụka ahụ na Madeline, na-ajụ ma ọ nyela Ed ihe mere ọ ga-eji kwere na ya nwere ike ịtụkwasị ya obi. Mgbe Dr. Reisman na-atụ aro na Madeline nwere ihe ahụ maka nlebara anya, Madeline na-ajụ, n'agbanyeghị na ọ nweghị ike ịkọwa ihe ọzọ.
Ya mere, Dr. Reisman zara ya, na-asị, don’t kwenyeghi na gị. Kedu ka ị ga - esi tụkwasị obi nha anya ebe ị nweghị okwukwe na ọnụ ọgụgụ gị?
Nzaghachi Madeline? Math abụghị akwa m siri ike.
Mgbe Dr. Reisman welitere okwu Madeline na Abigail achọghị ịga kọleji, Madeline na-akọwa na ya chere na Abigail agaghị abụ ihe ọbụla na-agụghị akwụkwọ. Onye na-agwọ ọrịa ahụ na-agba ọkụ ozugbo, na-ajụ ma Madeline na-eche otu ahụ n'ihi na ọ agụchabeghị kọleji.
N’otu oge, Madeline anaghị ekwu okwu, karịchaa mgbe Dr. Reisman kwuru banyere ndị mụrụ ya. Na-agwa ha okwu ọtụtụ?
N'ime ụgbọ ala ahụ, Madeline kwupụtara na Celeste ma kpughee na ya adịbeghị otu kemgbe ọ gara na nna ya na-ehi ụra na nwanyị ọzọ dịka nwatakịrị. Ebe ọ bụ na nna ya mere ya ka ọ ghara ime ya na nzuzo na mama ya, ọ nwetụbeghị mgbe ọ bụla banyere ya… na onye ọ bụla.
N’ịgbalị ịgbanwe isiokwu a, Madeline jụrụ ya ma ọ bụrụ na Celeste ka na-enwe ihe ndọghachi azụ. Ọ bụ, Celeste na-echekwa na ọ bụ akụkụ ụfọdụ n'ihi eziokwu ahụ na ọ bụghị Perry.
Dị ka ọ nwụrụ, ọ na-eche oge ụfọdụ m nwere ike ịnwụ anwụ, ọ na-ekwu.
Mary Louise, Zute Jane
Na akwarium, Mary Louise nkuku Jane (Shailene Woodley) wee gosi onwe ya. Ọ na-akọwa na Celeste gwara ya ihe niile, ọ chọkwara ịma ma Ziggy (Iain Armitage) nwere mmasị ịga ule nna. Mgbe Jane mesiri ya obi ike na Perry bụ naanị nwoke ya na ya dinara, Mary Louise na-enye nzaghachi dị egwu, na-asị,… ị chetara.
Naanị nnwale ọbara dị mfe, Mary Louise na-eti mkpu ka Jane na-efepụ.
Ka oge na-aga n'abalị ahụ, Jane mechara kwenye ma kwenye ka ya na onye ọrụ ibe ya bụ Corey (Douglas Smith), onye na-amabughị ihe omume ahụ. Ọ bụghị naanị na ọ na-ajụ nwanyị na-agba agba ajụjụ ọnụ ebe azụ si nri ụlọ oriri na ọ restaurantụ cameụ, mana ọ na-enyekwa nkọwa dị egwu banyere oge ya na-arụ ọrụ na Santa Monica Seafood.
Ka o sina dị, ọdịdị ya siri ike yiri ka ọ na-eto na Jane, onye nwere mmasị na otu o si nwee mmụọ, nke ọma, ihe niile. Mgbe ọ bụla o kwuru banyere Ziggy na mberede, Jane rịọ mgbaghara maka ịghara ịgwa ya na ya nwere nwa nwoke. Corey adighi ka fazed ma kwuo na ya choro izute ya.
Eji m n’aka na unu ga emekorita ihe. Ọ maara ọtụtụ ihe na-enweghị isi s ***, kwa, njakịrị Jane.
Ozugbo ahụ, Corey mehiere onye na-amakarị ihe nke ịdabere na nsutu ọnụ, na-amanye Jane ịlaghachi azụ azụ. Ọ na-emesi Corey obi ike na ọ bụghị ya ma na-akọwa na ọ kwesịrị ịnọ nkịtị na ntakịrị ntakịrị.
Dr. Peep ka Nnapụta
N’ụlọ akwụkwọ, onye nkụzi na-agụ akwụkwọ Charlotte si Weebụ na klaasị mgbe ọ hụrụ otu ụzọ ụkwụ na-arapara na kabulu broom: Amabella Klein (Ivy George).
N’ụlọ ọgwụ, ndị dibia bekee gwara Renata (Laura Dern) na Amabella nwere nsogbu ụjọ. Na mkpokọta Renata, ọ na-eleghara ha anya ma na-achọ ịmara onye mere nwa ya ihe a. Mgbe ndị dọkịta chetara ya na ọ bụ ọgụ ụjọ, ha na-atụ aro ịnye ndụmọdụ ing maka ezinụlọ dum.
Laa azụ n'ụlọ, Amabella na-anata nlekọta ahụike kachasị elu. Na site na ọkwa kachasị elu, anyị pụtara na ọ na-eleta onye na-agwọ ọrịa aha ya bụ Dr. Peep. (Chee echiche Little Bo Peep nwere mgbagwoju anya.)
Mgbe ha, er, nhọpụta, Dr. Peep na-anọdụ ala na Renata na Gordon (Jeffrey Nordling) ma na-ekpughe na ọ dịghị onye na-emejọ Amabella. Otú ọ dị, ụjọ na-atụ ya na ụwa ga-akwụsị mgbe ọ mụsịrị banyere mgbanwe ihu igwe na ụlọ akwụkwọ. Tụfuo nna ya ka ọ gaa mkpọrọ na mama ya bụ nne na nna helikọpta, anyị nwekwara onwe anyị nwa na-echegbu onwe ya.
Ihe na-eme na ọ dịwo anya, Dr. Peep na-ekwu.
N’ụlọ ọrụ ndị na-agwọ ọrịa, Dr. Reisman dọrọ Celeste aka ná ntị na ọ na-ejide nanị ezi ihe ncheta. Mgbe ọ na-atụ aro na Celeste enwetaghị agha ọ chere na Perry, onye na-agwọ ọrịa na-enye Celeste ihe na-emenye ụjọ: Perry bụ ọgwụ?
N’ụlọ ọrụ ndị uwe ojii, Mary Louise chọrọ ịmara ma ọ nwere ihe ọhụụ ọhụụ gbasara ikpe nwa ya nwoke. Ọ bụ ezie na onye ọrụ nyocha ahụ mesiri ya obi ike na ha ga-akpọ ma ọ bụrụ na ha achọta ihe ọ bụla, Mary Louise anaghị azaghachi azịza ya.
Otu nne kwesịrị ịma, o ji anya mmiri kwuo ya. Ikwenyeghi na nwa m nwoke amaburu, ọ bụ?
Ka oge na-aga, Celeste laghachiri n'ụlọ wee chọta Mary Louise na-ekiri vidio ụlọ ochie nke Perry na ejima, Max (Nicholas Crovetti) na Josh (Cameron Crovetti). Celeste ama odomo ndidịp mmọn̄eyet esie ke ini enye etiede ye mmimọ.
N’ụtụtụ echi, Jane na-etinye Ziggy n’ime ụgbọ ala mgbe ọ hụrụ Mary Louise na-ekiri ha site n’ebe dị anya. Mgbe e mesịrị na ụbọchị ahụ, Jane na-ezute Mary Louise, bụ onye na-agbasapụ foto ụmụaka nke Perry ozugbo. O juru anyị anya, ọ dị ka Ziggy.
M ga-achọ ịnọ na ndụ Ziggy, Mary Louise na-ekwu. Abụ m nne nne ya.
Jane kwetara na ya kwesịrị obere oge iji soro echiche ahụ na-agba mgba.
Mgbe Madeline tụrụ Ed ka ya na Bonnie na-a coffeeụ kọfị, ọ na-emere onye ọ bụla ihe ọ immediatelyụ immediatelyụ ozugbo. Ọ bụ ezie na Bonnie gosipụtara na ọ nwere obi ụtọ karịa, ọ na-agbaghara onwe ya mgbe ọ hụrụ esemokwu dị n'etiti Madeline na Ed. Mgbe Madeline jụrụ Ed ogologo oge ọ ga-ata ya ahụhụ, ọ na-eme ka o doo anya na ọ nọghị nso ịnagide ya.
N'ime ụgbọ ala ahụ, Madeline na-ebe ákwá na Celeste, na-asị, Amaghịdị m onye ọ bụ ugbu a. Nsogbu ya bụ na ọ na-adị ya ka ọdịda, ebe ọ bụ na ọ nwere ike ịgba ya alụkwaghịm nke abụọ ya.
N’ebe obibi Klein, Renata na-akwado iji gawa mgbakọ ụlọ akwụkwọ iji dozie ụjọ na klaasị. Gordon, n'aka nke ọzọ, na-ada ụda egwu na ibi ndụ kachasị mma. Mgbe Renata na-ata ya ahụhụ, Gordon tara ya ụta maka itinye oke nrụgide na Amabella.
Onwere ihe na eso gi, okwuru.
afọ ọhụrụ metụtara
Na nzukọ a, onye isi ụlọ akwụkwọ ahụ na-agba mbọ (ma na-ada ada) ime ka ndị nne na nna kwenye na mgbanwe ihu igwe bụ isiokwu dị mkpa iji kụzie n'ụlọ akwụkwọ elementrị. Yabụ, ọ kpọrọ oku Madeline ka ọ gwa ndị na-ege ya ntị okwu. Nsogbu ahụ? Madeline adighi na onodu uche di nma ma gaa n’iru n’atu ogha n’iru ihe obula ma mgbanwe mgbanwe ihu igwe.
Echere m na akụkụ nke nsogbu ahụ bụ na anyị na-agha ụmụ anyị ụgha, ọ na-ekwu. Anyị na-ejuputa isi ha na Santa Claus na akụkọ na njedebe obi ụtọ mgbe ọtụtụ n'ime anyị maara ọtụtụ njedebe n'ọtụtụ akụkọ na-a suụ. Ọ ziri ezi?
Madeline laghachiri n'ụlọ wee hụ Abigail na-eche ya. Mgbe Abigail kwuru na ya nụrụ maka okwu ahụ, Madeline zara ya ozugbo,, nwere ike iwetara m mmanya?
N'ụlọ, Celeste hụrụ Mary Louise ka ọ na-atụta ihe n'ime ya. Mgbe a na-eche ya ihu, Mary Louise na-ekwu na ya na-achọ ihe ga-enyere ya aka ihi ụra.
Been na-amata? Celeste kwuru. Echere m na ọ ga-akacha mma ma ọ bụrụ na ịchọta ebe ọzọ. Mgbe Mary Louise na-egosi na Celeste nwere nsogbu ọgwụ, Celeste na-echetara Mary Louise na nwa ya nwoke na-emerụ ya ahụ.
Ihe omume ahụ mechiri Celeste na-ekiri vidio ụlọ nke Perry. * Na-ehichapụ anya mmiri *
'' Celeste ga - enwe ike ịgbake site na ọnwụ Perry? Ma ọ bụ Mary Louise ọ ga-eme ka ọ bụrụ ihe na-agaghị ekwe omume ịga n'ihu? Mara na anyị ga-echere ruo mgbe Nnukwu Littlegha laghachi HBO na Sọnde na-esote, June 30, na 8 pm
Njikọ: Chere, Perry * * nwụrụ n'ezie? Echiche ọhụrụ a ‘Biggha Littlegha Dị Ukwuu’ nwere ike ime ka i kwenye
Omenala ezumike ọhụụ 25 ga - amalite n’afọ a
11 Ihe Ngosiputa dika ‘Schitt’s Creek’-aka Comedy Series nke wepuru 2020 Emmys
Gee Ntị, Swifties: Katy Perry's Newest Song 'Daisies' nwere ike bụrụ naanị Taylor Swift Njikọ Aka
Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu vs. Mpempe Mpekere: Kedu ihe dị iche na nri nri ụtụtụ ndị a?
Ntọala kachasị mma maka akpụkpọ anụ
Echefula webinar a ma ọ bụrụ na ị na-eche banyere nkwakọ ngwaahịa Sustainable
Otu Kate Middleton ọ bụla na-ele anya na Royal Royal nke Pakistan
5 ranlọ ezumike dị jụụ na Detox, kwụpụta ma mee ka obi gwụ obodo gị
Nri iri atọ dị mfe nfe iji nwalee ọnwa a
Kedu ihe 'Na-echere' Pụtara? Onye na-ere ahịa na-akọwapụta okwu iri nke na-eme ka ndị na-ere ahịa na-eme njem
Charlize Theron Naanị Ekekọrịta A Anya Ọhụrụ Site na Ihe nkiri Na-abịa (na Anyị Amataghị Ya)
15 Ntụziaka a na-atụghị anya ya You nwere ike iji Mpekere Mpekere Mpekere
Robinsicecream Magazine - A N'Elu Ikpo Okwu Ebe Ndị Inyom PụRụ Inwe ỌHụRụ ỌMụMa Na AtụMatụ Na Ejiji, Mma, Ahụ Ike Na MmekọRịTa.
ndakọrịta kansa na akara ndị ọzọ
kacha mma ịhụnanya na fim na Hollywood
Hollywood akụkọ ihe mere eme nkiri ndepụta
top 10 Hollywood fim ihunanya
ka ida ida abụba mmega
Ndụmọdụ ụlọ maka ịgbanye ihu
Lọ obibi kachasị mma ịnọ nso na Grand Canyon
Emily Ratajkowski Nabatara Nwa Mbụ - Anyị Anweela Aha na Ihe osise
11 Winter Wonderland Wedding echiche ndị dị ọcha anwansi
14 Sweaters gị Fashion-Forward Dog * Mkpa * maka ọdịda
Ebe 8 Dị Platụnanya toga na Caribbean
Copyright ©2021 All rights reserved | robinsicecream.com | Amụma Nzuzo